▷ Joojinta Wayn: Maxay Shaqaaluhu u Joojiyaan (iyo sida Shirkaduhu uga jawaabi karaan) - 【Isbarbardhigga】 2022
Is-casilaadda weyn: sababta shaqaaluhu u joojiyaan (iyo sida shirkaduhu uga jawaabi karaan)
Maanta, waxa markii ugu horreysay loo arkay burburkii xoogga shaqaaluhu wuxuu noqday isbeddel dhab ah: Shaqaaluhu waxay joojiyaan shaqooyinkooda guud ahaan.
Bishii Oktoobar, 4,1 milyan oo shaqaale ah ayaa ka tagay shaqadooda. Tani waxay ka hooseysaa rikoorka 4,4 milyan oo qof oo ka tagay suuqa shaqada bishii hore iyo 4,3 milyan bishii Ogosto. Laakiin wali way ka sarraysay bil kasta illaa Juulay sanadkan, marka loo eego xogta Xafiiska Tirakoobka Shaqaalaha ee Maraykanka.
Sahan dhowaan lagu sameeyay 26.000 oo shaqaale ah oo lagu sameeyay liiska shaqo raadinta ayaa muujisay in 22% dhammaan dadka shaqo doonka ah ay sheegeen inay ka tageen shaqadoodii hore, 73% shaqaalaha hadda shaqeeyana waxay sheegeen inay si firfircoon uga fikirayaan inay ka tagaan shaqadooda.
Istiqaalada Wayn (sida dhaqaalayahanadu ikhtiraaceen bixitaanka shaqaalaha) waxay ka tarjumaysaa ku qanacsanaan la'aan qoto dheer oo ku aadan xaaladihii hore ee shaqada. Faafida caalamiga ah ee socota waxay u ogolaatay shaqaaluhu inay dib uga fikiraan shaqadooda, dheelitirnaanta nolosha shaqada, yoolalka muddada dheer, iyo xaaladaha shaqada.
Qaar ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee shaqaaluhu ay isaga tagaan sanadkan ayaa ah ku qanacsanaan la'aan sida loo shaqeeyaha ula dhaqmay intii lagu jiray cudurka (19%); mushahar yar ama guno la'aan (17%); iyo dheelitir la'aanta u dhaxaysa shaqada iyo nolosha gaarka ah (13%), marka loo eego sahanka shaqada.
Shaqaalaha da'doodu tahay 20-ka sano waxay aad ugu dhow yihiin inay shaqada ka tagaan marka loo eego da'yarta iyo shaqaalaha ka weyn, marka loo eego liiska shaqada. Dhab ahaantii, qiyaastii saddex meelood meel shaqaalaha 20-ka sano ayaa ka tagay shaqooyinkoodii hore, marka la barbardhigo 20% kaliya ee shaqaalaha 50-ka iyo ka weyn. Ma jirin wax farqi ah oo u dhexeeyay heerarka ka-tagidda xagga jinsiga.
Liiska shaqada ayaa qorsheynaya inuu sii daayo natiijooyinka sahankiisii ​​​​ugu dambeeyay bishii Janaayo, laakiin xogta hordhaca ah waxay muujineysaa in 61% dhammaan shaqo doonka ay xiiseynayaan fursadaha shaqo ee fog marka la gaaro 2022. Shaqaalaha hadda shaqeeya meel fog (ugu yaraan qayb ka mid ah waqtiga), 45% Waxay yiraahdeen way joojinayaan haddii loo-shaqeeyahaagu u baahdo shaqo-qof ahaan waqti-buuxa ah 2022.
Iyada oo tirada badan ee is-casilaadda la filayo inay sii socoto illaa 2022, abuurista jawi shaqo oo soo dhawayn iyo raaxo leh, labadaba fog iyo shaqsi ahaanba, waxay fure u noqon doontaa sii haynta shaqaalaha.
Maamulayaasha iyo maamulayaasha si isku mid ah ayaa door ka ciyaara ladagaalanka gubashada shaqaalaha, taas oo macnaheedu yahay shirkaduhu wax badan ayay qaban karaan si ay shaqaaluhu ugu farxaan marka suuqa shaqada uu ka buuxo doorashooyin.
Dhab ahaantii, shaqaaluhu mar walba ma joojiyaan shaqadooda sababtoo ah waxay ku qanacsan yihiin shaqada. Tusaale ahaan, haweenku waxay ka tagayaan xooggooda tirooyin aan dheellitirnayn sababtoo ah mas'uuliyadaha qoyska, haddii ay yihiin caruur ama waalidiin da' ah, sida ay sheegtay Amy Loomis, agaasimaha cilmi-baarista ee adeega cilmi-baarista suuqa caalamiga ah ee Future. Shaqada ee IDC.
Marka loo eego liiska shaqada, shaqaale badan ayaa ka warbixiya inay isaga tageen si ay u raacaan waddo shaqo oo cusub (20%), taasoo ka tarjumaysa sida masiibada u abuurtay fursad ay qaar ku beddelaan beeraha ama ay qaataan doorar soo jiidasho leh, sida uu qabo liiska shaqada.
"Waxaa laga yaabaa inay aad ugu faraxsan yihiin shaqada ay hadda hayaan, laakiin waxaa jira wax ka weyn oo ku saabsan mustaqbalka. "Waxaan ku samayn karaa 20% mushahar dheeraad ah oo aan ku noolahay dalka," Loomis ayaa yidhi.
Qodob kale oo ka dambeeya heerarka sare u kaca ayaa u muuqda inay tahay dareenka ku dheggan si xirfad leh. Sahan uu sameeyay bixiyaha madal maamulka shaqaalaha Lattice ayaa lagu ogaaday in 43% jawaab bixiyaasha ay dareemeen in wadooyinkooda shaqo ay istaageen ama ay hoos u dhaceen heer wareer. Isbeddelkan ayaa si gaar ah ugu muuqda shaqaalaha da'da yar, maadaama 38% shaqaalaha Generation Z (dhashay 1997 ka dib) ay raadsadaan shaqooyin leh hufnaan weyn marka la eego jihada shaqada iyo horumarka, sida lagu sheegay sahanka.
"Dadku waa hantida ugu muhiimsan ee shirkadu leedahay, qarashka ku baxayana waa mid sarreeya," maamulaha Lattice Jack Altman ayaa ku yiri hadal uu soo saaray. Maareeyayaashu waa inay mudnaan siiyaan aragtida shaqaalaha horrumarkooda shaqo, iyo sidoo kale inay bixiyaan latalin iyo qalab si ay u horumariyaan, si loo hubiyo inay sii haystaan ​​kartidooda ugu fiican. "
Xoogga saaraya waayo-aragnimada shaqaaluhu waxay ka tarjumaysaa baahida sii kordheysa ee shirkadaha si ay dib ugu eegaan habraacyadooda maamul iyo ka qaybgalka dadka. Warbixinta Deloitte ee ku saabsan Isbeddellada Raasamaal ee Aadanaha ee Yurub waxay ogaatay in 54% hoggaamiyeyaasha ay dib u soo nooleynayaan hababka shaqada mustaqbalka, marka la barbar dhigo 28% ka hor COVID-19. Shirkado aad u tiro badan ayaa dib u qiimaynaya dhaqamada kheyraadka aadanaha ee duugoobay iyagoo isku dayaya inay si wanagsan u fahmaan waxqabadka iyo hawlgelinta shaqaalahooda, iyo sidoo kale inay taageeraan horumarkooda iyo korriimadooda.
Hay’aduhu waa inay maalgashadaan tabobar hoggaamineed oo xagga sare ka socda oo lagu barayo sida loo dhiirigaliyo shaqaalaha oo runtii loo dareensiiyo inay degdeg ugu jirto shaqada ay qabanayaan. Si kale haddii loo dhigo, shaqaaluhu waa inuu dareemaa in shaqadiisu tahay mid muhiim ah oo uu maamuluhu ku kalsoon yahay isaga. Tababarka maareeyaha noocaan ah waa in si isku mid ah loo bixiyo guud ahaan ururka, laga bilaabo maareeyayaasha safka hore ilaa maareeyayaasha safka hore, Loomis ayaa xusay.
Marka la fulinayo siyaasado cusub, sahanka shaqaaluhu wuxuu noqon karaa mid qiimo leh oo cabbiri kara haddii ururrada guud ahaan. "Waxay ku saabsan tahay in la furo wada hadal laba-gees ah si maamulku u waafajiyo baahiyaha shaqaalaha," Loomis ayaa yidhi.
Shaqaalaha cusub ee la shaqaaleysiiyay, waxaa muhiim ah in si degdeg ah loo abuuro dareenka lahaanshaha si ay u dareemaan qayb ka mid ah koox isku xidhan. "Waxaad isku dayaysaa inaad abuurto dhaqan ula kac ah," Loomis ayaa yidhi. "Dhaqanka shirkadu ma yimaado oo kaliya marka maareeyaha uu aamino shaqaale, laakiin sidoo kale marka shaqaaluhu haystaan ​​tiknoolajiyada iyo qalabka ay u baahan yihiin si ay ula xiriiraan kuwa kale ee ururka. "
Qalabka iskaashiga iyo isgaarsiinta ayaa sidoo kale lama huraan u ah abuuritaanka dhaqan wadaaga iskaashiga. Qaar ka mid ah waxyaabaha ugu dambeeyay ee daruuriga ku saleysan waxaa ka mid ah Workspace iyo Viva ee Google iyo Microsoft, siday u kala horreeyaan. Asana waa xiddig kale, sida uu qabo Loomis.
Falanqaynta ayaa sidoo kale bilaabaya inay door ka ciyaaraan waayo-aragnimada shaqaalaha, taasoo u oggolaanaysa maareeyayaasha inay la socdaan sida dadku ula xiriiraan shirkadda, iyo midba midka kale, ama haddii ay go'doon yihiin. "Waxay ku cadaadin karaan maamulaha inuu ogaado in qofkan kooxdooda ka tirsan uusan qofna la soo xiriirin laba maalmood," Loomis ayaa yidhi. Laakiin waxaad weli u baahan tahay inaad shaqaalaha sir ku ilaaliso maalinba maalinta ka dambaysa, si aanay u dareemin maamul yar. "
Marka lagu daro guulaha wax soo saarka ee la diiwaan galiyay ee ka dhashay masiibada sababo badan dartood, daraasaduhu waxay muujinayaan in waayo-aragnimada shaqaale ee wanaagsani ay gacan ka geysato khibrad wanaagsan oo macmiil ah.
Sahan bishii Luulyo ay samaysay shirkadda cilmi-baadhista ee IDC ayaa muujisay in shaqaalaha farxadda badan iyo kuwa badan ee hawl-galka ahi ay turjumaan waayo-aragnimada macmiilka, qanacsanaanta macmiilka oo sarreeya, iyo faa'iido badan. Dhab ahaantii, 62% ayaa sheegay in uu jiro xiriir sabab ah oo qeexan oo u dhexeeya shaqaalaha iyo khibradda macmiilka iyo in saameyntu ay ahayd "muhiim" ama "muhiim" oo la qiyaasi karo. In ka badan kala badh (58%) ayaa muujiyay in ku qanacsanaanta macaamiishu ay tahay halbeeg muhiim ah oo lagu qiimeeyo wax soo saarka shaqaalaha.
Marka loo eego IDC, qaar ka mid ah qodobbada muhiimka ah ee saameeya khibradda shaqaalaha waa:
Daah-furnaanta, kalsoonida iyo xiriirka loo-shaqeeyaha;
Helitaanka jawi shaqo oo wada shaqayn la'aan ah oo leh khibrado dhijitaal ah oo lagu dhex daray socodka shaqada;
Dhaqan urureed ee lahaanshaha iyo ka mid noqoshada;
Dhagayso, ka qaybgeli oo qir shaqaalaha maamulka iyo asaagooda;
Horumarinta xirfadeed iyo fursadaha horumarinta;
Mas'uuliyadda bulsho ee shirkadda ee la xaqiijiyay.
Ururadu waxay sidoo kale maalgashadaan tignoolajiyada si ay u taageeraan jawi shaqo oo isku dhafan.
Sida laga soo xigtay daraasad la daabacay Noofambar by IDC, 2023, isbeddelka dhijitaalka ah (DX) iyo isbeddelka ganacsigu waxay horseedi doonaan 70% 2000 oo hay'adaha caalamiga ah inay marka hore hirgeliyaan moodooyinka shaqada fog ama isku-dhafka ah, dib-u-qeexidda qaababka ganacsiga, habka shaqada iyo ka-qaybgalka xirfado kala duwan. kooxaha. Marka la gaaro 2024, 70% shirkaduhu waxay si weyn u maalgashan doonaan xogta, agabka iyo bartilmaameedyada kala duwanaanshaha, sinnaanta iyo ka mid noqoshada si loo qeexo xeeladaha shaqo qorista iyo raasamaal ee aadanaha.
Marka la gaaro 2025, 90% dhismaha cusub ee ganacsiga iyo dib u habeynta dhismuhu waxay isticmaali doonaan tignoolajiyada tas-hiilaadka casriga ah ee taageeri kara goobaha shaqada ee dabacsan iyo khibradaha xafiisyada iyo waxqabadka wanaagsan, sida ay qabto IDC.
Waxay ku socotaa iyada oo aan la sheegin in waayo-aragnimada shaqaale ee weyn ay u horseedi karto helitaan karti badan iyo sii hayn, IDC ayaa ku sheegtay blog-ka Sebtembar.
"Tani waxay si gaar ah muhiim u tahay marka dunidu ay la qabsato xaqiiqada goobta shaqada ee isku-dhafka ah ee cusub taasoo meesha ka saaraysa qaar ka mid ah xaddidaadyada juqraafiga ee kartida, taasoo horseedaysa tartan kororka loogu jiro hibadaas," blog ayaa yidhi.
Mareegta ugu fiican ee wax soo saarka onlaynka ah lagu iibsado
Waa maxay waxa aad ugu wanaagsan Google-ka "muraayadaha tarjumaada"?
Podcast: Ma laga yaabaa inay wax ka beddelaan Qorshayaasha WWDC ee Apple?